Taorian’ny fahazoan-dalana avy amin’ny minisiteran’ny fiarovam-pirenena nahafahana nanenjika ireo miaramila na ny “ordre de poursuite”, dia miaramila 20 avy ao amin’ny RFI Ivato no naiditra am-ponja vonjimaika eny Tsiafahy, ary ny 7 kosa eny Antanimora. Toa niteraka lonilony teo amin’ny tafika sy ny mpitsara io raharaha io satria ny 17 jona ny filohan’ny Sendikan’ny Mpitsara eto Madagasikara (SMM) Atoa Clément Jaona fa misy ny teritery sy ny tsindry natao tamin’ny mpitondra ary nisy resaka hatramin’ny mety hisian’ny fikomian’ny naman’ireo miaramila raha tsy mivoaka ny namany. Mety nahazo fampanantenana fa harovana ve ireo miaramila matoa nanaiky mora foana ny fisamborana sy fanagadrana vonjimaika ? Nilaza ny tsy hanaiky tsindry ny mpitsara. Andrasana izay ho valin’ny fitsarana anio fa tena raharaha saropady izy io satria anisan’ny manamarika ny fiandrianam-pirenena ny fitsarana sy tafika, saingy raha ny zava-misy dia samy miaro ny namany satria ny fitsarana milaza fa tsy hanaiky teritery ary ny an-kilany ihany koa mety mitaky ny fanafahana ny namany. Hafampana io raharaham-pitsarana io. Efa nampifandona ny mpitsara sy ny mpitandro filaminana ny raharaha nahafaty ny mpitsara Rehavana Michel ny taona 2010. Ary mba aiza ho aiza ny tohin’ny raharaha Antsakabary nisian’ny polisy 40 eo voarohirohy tamina fandorana tanàna ? Tsy afa-mihetsika ve ny fitsarana satria mifanehitra amin’ny manam-basy ?